रोशी र जनक मा.वि. बिच भएको मैत्रीपुर्ण भलिवलमा रोशी विजयी – Radio Roshi
रोशी र जनक मा.वि. बिच भएको मैत्रीपुर्ण भलिवलमा रोशी विजयी
जिल्लाको रोशी माध्यमिक बिद्यालय र जनक माध्यमिक बिद्याल बिच भएको मैत्रीपुर्ण भलिबल खेलमा रोशी माध्यमिक विद्यालय विजयी भएको छ । रोशी गाँउपालिका वडा नं ७ स्थित रोशी माध्यमिक विद्यालयका र नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं ४ स्थित जनक माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरु बिच भएको प्रतिस्पर्धामा रोशी विजयी भएको हो । बेस्ट अफ ५ को आधारमा भएको उक्त खेलको ३ सेटमा रोशीले लगातार जित निकाल्न सफल भएको हो ।
गौतम बिजुक्छेको कप्तानीमा उत्रिएका रोशी टिममा ७ जना र राम शरण सिग्देलको कप्तानीमा उत्रिएको जनक टिममा ९ जना खेलाडि सहभागि थिए । उक्त खेल जनक माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा भएको थियो ।